क्यासिनोको शहर बन्दै नेपालगञ्ज – sunpani.com
क्यासिनोको शहर बन्दै नेपालगञ्ज
सुनपानी । १२ बैशाख २०७९, सोमबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्जका मेयर डा. धवलशमशेर राणा भन्नुहुन्छ, नेपालगञ्जलाई क्यासिनोको शहर बनाउनु पर्छ । क्यासिनोको शहर बनाउदा नजिक पर्ने भारतको लखनउबाट समेत धनाढ्यहरुको नेपालगञ्जमा आगमन हुन्छ । जसले गर्दा नेपालगञ्ज गुल्जार हुन्छ ।’
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा दोस्रो पटक मेयर भएको पुरैकाल नै राणाले नेपालगञ्जलाई क्यासिनो सिटी बनाउनु पर्छ भनिरहेका छन् । क्यासिनोको राम्रो संभाब्यता रहेको राणाको भनाई छ । क्यासिनो सिटी बनाउदा ठूलो परिमाणमा भारतीय मुद्रा भित्रिनेमात्रै होइन, होटलहरु खचाखच हुने आकलन गरिएको छ ।
नेपालगञ्जमा अहिले सात वटा क्यासिनो छन् । स्नेह होटल, सिद्धार्थ, सोल्टी, कल्पत्रु, सिग्नेट, सिटी प्यालेस, ड्रिमल्याण्डमा क्यासिनो सञ्चालनमा छन् । बाटिका, स्टारलाइटलगायत तीन वटामा क्यासिनो सञ्चालन गरिदैछ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले क्यासिनो सञ्चालनका लागि परामर्श दिने गरेको छ । मेयर राणाको ठूूलो इच्छा रहेकाले क्यासिनोको बृद्धि विकासमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले चासो दिइरहेको छ । उपमहानगरपालिकाले क्यासिनो र पर्यटन सम्बन्धी सहजीकरण गरिरहेको छ ।
नेपालगञ्जका क्यासिनोमा सीमावर्ती भारतका विभिन्न शहरबाट ग्राहक आइरहेका छन् । क्यासिनो सञ्चालक होटलले नाकामै गाडी पठाएर ग्राहक ल्याइरहेका छन् । क्यासिनोमा आउने भारतीयले केही न केही खर्च गरेर जाने गर्दछन् । यसले यहाँका होटललाई फाइदा पुग्ने गरेको छ । नेपालगञ्जलाई क्यासिनोको शहरका रुपमा विकास गरेर सडकमा बत्ती, सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दा नेपालगञ्जमा भारतीयको ठूलो भीड लाग्ने आकलन गरिएको छ ।
भारतको ठूलो शहर लखनऊबाट क्यासिनो खेल्न धनाढ्यलाई ल्याउन सकेमा र उसलाई क्यासिनो खेल्नुका साथै जिल्लाका पर्यटकीय स्थलको भ्रमण गराउन सकेमा यहाँको पर्यटन व्यवसाय फस्टाउने जानकारहरु बताउँछन् । नेपालगञ्जका मेयर डा. राणाको दीर्घकालिन योजना पनि यही हो । मेयर राणाले पर्यटन वा होटलसम्बन्धी हुने कार्यक्रममा नेपालगञ्जलाई क्यासिनोको शहरका रुपमा विकास गरेर जानु पर्ने बताउँदै आउनु भएको छ । क्यासिनोलाई व्यवस्थित गरेर जादा शहरको विकासमा पनि टेवा पुग्छ नै ।
क्यासिनोमा नेपालीलाई खेल्न दिइदैन । भारतीयलाई नै लक्षित गरेर सीमावर्ती शहर नेपालगञ्जमा क्यासिनाको संख्या बढिरहेको छ । क्यासिनोको निहुँमा भारतीयहरु नेपालगञ्ज आइरहेका छन् । अहिले सञ्चालनमा रहेका सात वटा क्यासिनोमा भारतीयको उपस्थिति राम्रो छ । पहुँच र सेवा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै भारतीयहरु नेपालगञ्जका क्यासिनोलाई रोजिरहेका छन् । क्यासिनो सञ्चालकले भारतीय ग्राहकलाई नाकामै यातायातको सुविधा पु¥याएका छन् । सीमावर्ती शहरमात्रै नभएर लखनऊसम्म नेपालगञ्जको क्यासिनो र पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार गर्न सकेमा भारतीय पर्यटकको उपस्थिति बढ्ने देखिन्छ ।
नेपालगञ्जका चोकचोकमा राखिएको हाइमास्ट लाइट र सोलारले रात्रीकालिन ग्राहकलाई हिड्डुलमा सहज गराएको
छ । नेपालगञ्जमा गएर निर्धक्कसँग क्यासिनोमा मनोरञ्जन गरेर आउन सकिन्छ भन्ने भारतीयमा विश्वास दिलाउन सकेमा ग्राहकको संख्या बढ्न सक्छ । नेपालगञ्ज नाकाबाट भारतीय प्रवेश गर्दा नै गर्ने व्यवहार, इज्जत पनि यसमा जोडिएको हुन्छ । नेपालगञ्जलाई क्यासिनोको शहर बनाउनका लागि होटलको मात्रै होइन, यहाँका बासिन्दाको पनि ग्राहकप्रतिको सोच सकारात्मक हुनु जरुरी छ ।